यी ५ कुरा फेसबुकमा नहाल्नुस् ! जेल सजाय हुन सक्छ
सामाजिक सञ्जालले मानिहरुलाई फाइदा त पु¥एकै छ । मानिसहरुले यसको सही हिसाबले पनि प्रयोग गरेका छन् र दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन् । फेसबुक तथा ट्वीटरका प्रयोगकर्ता बढेसँगै मानिसहरुको अश्लिलता पनि बढेको छ । फेसबुक ट्वीटरमा जे पायो त्यही पोष्ट गर्ने वा सन्देश पठाउने
मोबाइल हराए अथवा चोरी भएमा कसरि पत्ता लगाउने ?
मोबाइल हराए अथवा चोरी भएमा कसरि पत्ता लगाउने? [How to find Lost or Stolen Smartphone?] तपाइँहरु आज भोलि नया नया किसिमका Smartphone प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन निकै मुल्याबान हुने गर्दछन I कहिले काँही जानेर वा नजानेर तपाइको Smartphone कतै गाएब हुन् सक्छ अथवा चोरी हुन सक्दछ हैन | अनि बबाल टेन्स हुनु
अब बस चढ्दा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा तिर्नुपर्ने !
काठमाडौँ । नेपाल बैंकको सहकार्यमा नेपालमा पहिलोपटक साझा यातायातले यात्रुलाई पैसाको सट्टा स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट भाडा तिर्ने प्रविधिको परीक्षण थालनी गरेको छ । साझा यातायातको कार्यालय पुल्चोकमा आज आयोजित कार्यक्रममा स्मार्ट यात्रा कार्डको परीक्षणको
सधैका लागि बन्द भो १२ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आएको हाँस्य टेलिश्रृंखला 'तितो सत्य'
काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजन प्रसारण हुने चर्चित हाँस्य टेलिश्रृंखला तितो सत्य बन्द भएको छ । १२ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आएको ‘तीतो सत्य’लार्इ निर्देशक एबम् मूख्य कलाकार दीपकराज गिरीले बन्द गरेको घोषणा गरेका हुन् । '६ सय भागसम्म प्रसारण भइसकेको नेपालकै
बिश्वमै भाइरल बनिरहेको महिलाको आश्चर्य चकित पार्ने भिडियो हेर्नुहोस् !
तपाईले झट्ट हेर्दा यी महिलाको अनुहारमा आँखा,नाक र मुख २ सेट देख्नुहुन्छ । यी महिलाको तस्विर मात्र हैन भिडियो हेर्दा समेत तपाई अचम्ममा पर्नुहुन्छ । हालसम्म ६.५ मिलियन भन्दा बढीले हेरिसकेको यो भिडियो हाल बिश्वमै भाइरल बनिरहेको छ । भिडियोमा एक महिलाको अनुहारमा
अर्काकी श्रीमतीसँग यौनसम्पर्क गर्दागर्दै सेनाका एक जवान ओछ्यानबाटै पक्राउ
महेन्द्रनगर । विवाहित महिलालाई आफ्नो माया जालमा पारेर यौनसम्पर्क राख्दाराख्दै नेपाली सेनाका एक जवान कञ्चनपुरमा रंगेहात पक्राउ परेका छन् । डडेल्धुरास्थित गरुड दल गणमा कार्यरत सैनिक जवान चन्द्र बहादुर भुजेललाई मंगलबार राति दोधारा चाँदनीकी एक विवाहित
के तपाईलाई थाहा फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरबर्गबारे ९ रोचक कुरा ? ल जान्नुहोस् !
फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरबर्गबारे विश्वव्यापी चर्चा हुने गर्छ । उनको सफलताको कथाबारे धेरै समाचार बनिसकेका छन् । तर, उनको जीवनका केही रोचक कुरा तपाईंलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । यी हुन्, जुकरबर्गका नौ रोचक कुरा : १. जुकरबर्गले फेसबुकको रङ निलो राख्नुको कारण उनका
फेसबुकले ल्यायो नयाँ धमाकेदार यस्तो फिचर
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले एक नयाँ प्रविधि लिएर आउँदै छ, जसको सहायताले दृष्टिबिहिन मानिसले पनि स्ट्याटस र फोटो देख्न सक्नेछन् । ‘एल रिसर्च’ नाम दिइएको यस नयाँ फीचरले फोटोलाई हेरेर फोटोमा भएका एक–एक चिजलाई बर्णन गर्न सक्षम हुनेछ । फेसबुकका
केहि अनलाईनमा नग्न फोटो सार्वजनिक भएपछी मोडल काजल यसो भन्छिन् - भिडियो सहित
काठमाडौँ । त्यसो त कलिउड फिल्मी वजार वलिउड र हलिउडको हिसावमा तुलना गर्न लायक मानिदैन । यो कुरा स्वयं नेपाली फिल्मी क्षेत्रका कलाकर्मीहरुले स्विकारेको विषय पनि हो । जसो तसो गर्दै अगाडी वढेको नेपाली फिल्मी वजारमा पनि सानातिना घटनाहरु वाहिरीनु स्वभाविकै हो ।
विश्वकै पहिलो रोबट अभिनेत्री जापानी फिल्ममा !
एजेन्सी । विश्वमै पहिलो पटक जापानमा एक फिल्ममा एक अभिनेत्रीको रुपमा रोबोटलाई काम गराइएको छ । जापानी फिल्म ‘सायोनारा’मा रबरको छालाले बनेको ‘जेमिनाइड एफ’ नामको रोबट अभिनेत्रीले काम गरेको हेर्न पाइनेछ । पश्चिम जापानको ओसाका यूनिभर्सिटीका प्रख्यात
फेसबुकको ‘नक्कली प्रेम’ले यसरी नराम्ररी फसिन् युवती
अस्ट्रेलियाकी एक महिलालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् एक व्यक्तिसँग परेको प्रेमको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । एलन म्याककार्टी नामका एक व्यक्तिसँग फेसबुकमा यस महिला प्रेममा परिन्, जसले गर्दा उनले ३ लाख डलर गुमाइन् । झूटो प्रोफाइल भएको पत्ता लागेपछि उनले
फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले यसरी लियो युवतीको ज्यान !
एजेन्सी । प्रविधिको विकाससँगै आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले एक युवतीको ज्यान लिएको छ । मुम्बईको मीरा रोड इलाकामा एक युवतीले फेसबुककै कारण ज्यान गुमाएकी हुन् । फेसबुकमा आफूविरुद्ध लेखिएको कमेन्ट सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरेकी हुन् । आज भन्दा ९ दिन पहिला